Skype dia mandefa fanavaozana vaovao hifaninana amin'ny kinova WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Skype dia mandefa fanavaozana vaovao hifaninanana amin'ny WhatsApp vaovao
Skype vao nanambara fa afaka herinandro vitsivitsy dia hanana fanavaozana vaovao ny serivisy izay nampiharana azy ireo fanatsarana ny antso sy ny mailaka am-peo, zavatra tena ilaina raha te-hiatrika ny tolo-kevitra vaovao izay mitondra ny fanavaozana ny WhatsApp tsy ho ela izy ireo, ankoatry ny zavatra hafa, afaka manao antso an-tsary ihany ny mpampiasa amin'ny farany.
Araka ny efa nampoizina, indrindra raha raisintsika fa raha eo amin'ny sehatry ny antso an-tsary dia benchmarka tanteraka ny Skype, tsy ela dia ela ny valin'ilay sehatra ary ankehitriny dia afaka miantso vondrona na ny fitaovanao Android o iOS. Ho setrin'izany, afaka manohy ianao mitazona ny resaka na dia tapaka aza ilay olona nanomboka azy, zavatra izay tsy nitranga tamin'ny kinova ankehitriny, rehefa nifandray ilay mpampiasa nanomboka ny antso an-tsary, na dia te hanohy amin'ny resaka aza ireo mpampiasa hafa dia nifarana.
Skype dia nohavaozina mba hanohizana mitazona ilay karazany manoloana ireo fiasa vaovao nambaran'ny WhatsApp.
Ho setrin'izany, amin'ity kinova Skype vaovao ity hoesorina ny fiarahabana manokana, fampiasa iray izay tena nalaza be ary nampiasain'ny mpampiasa tamin'izany fotoana izany, ny fampilazana mailaka ary ny SMS fanoratana. Ho tsipiriany iray dia lazao aminao fa ny voicemail dia hiatrika fiovana sasany ihany koa satria izao dia afaka manohy mamela hafatra am-peo mahazatra ianao, toy ny taloha, fa koa video. Tsy isalasalana fa ohatra mazava iray amin'ny fomba fiasan'ny Microsoft hanatsorana ny fampiasana ny sehatra malaza araka izay tratra.
More Information: androidauthority
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Skype dia mandefa fanavaozana vaovao hifaninanana amin'ny WhatsApp vaovao
Ny iPhone 8 dia vita amin'ny vera ary hanana maodely vaovao